Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက် | Celebwebmagazine
Celebrity နေ့စဉ်သတင်း၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်
ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ အတွက် Myanmar Celebrity အနုပညာ နေ့စဉ်သတင်း။
1. လူမင်း၊ ပြေတီဦး၊ အူဝဲ တို့ ထောင်ဒဏ် (၃) နှစ်စီ ချမှတ်ခံရ
2. အိမ်ခြံမြေ အလုပ်မှ ငွေ နှစ်သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေကဗျာ
3. ခင်ပွန်း ရဲ့ Surprise ကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အောန်ဆိုင်း
4. ဖခင် အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်သေးဘူး ဆိုတဲ့ ထားထက်
5. မွန်းကြပ်မှုတွေ ဖြေလျော့စေဖို့ သီချင်း ဆိုပြတဲ့ ပန်းရောင်
6. သရုပ်ဆောင် နက္ခတ် ရဲ့ သမီးလေး ရက် (၁၀၀) ပြည့်
@Myanmar Celebrity Update: Daily Update News of Myanmar Celebrities, December 31, 2021. #MyanmarCelebrityNews #မြန်မာအနုပညာသတင်း #MyanmarCelebrityUpdate #MyanmarCelebrityDaily #LuMin #YeDeight #NatKhat #AwnSeng #HtarHtetHtet #PanYaungChel #MayKabyar #PyayTiOo #EaindraKyawZin #PoPo #SinMa #MyoThandarTun #WinMinThan #PaingTaKhon #SawPhoeKwar #နက္ခတ် #အောန်ဆိုင်း #မေကဗျာ #လူမင်း #ရဲတိုက် #အိန္ဒြာကျော်ဇင် #ပြေတီဦး #မျိုးသန္တာထွန်း #ပိုပို #စောဖိုးခွား #ပိုင်တံခွန် #ဆင်မ #ဝင်းမင်းသန်း